कलाकार राजेन्द्र खड्गी पक्राउ, मानव तस्करी मुद्दा – www.janabato.com
कलाकार राजेन्द्र खड्गी पक्राउ, मानव तस्करी मुद्दा
२५ माघ २०७४, बिहीबार १३:२३ February 8, 2018 Janabato Online
जनबाटो संवाददाता । माघ २५–मानवतस्करीको आरोपमा कलाकार तथा द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी पक्राउ परेका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआईबी)ले उनलाई बिहिबार पक्राउ गरेको हो। मानव बेचबिखन मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ दिन थुनामा राख्न अनुमती दिएको सिआईबीका एसएसपी घनश्याम अर्यालले बताए।
विभिन्न कार्यक्रममा नाममा युवाहरुलाई मानवतस्करी गरेको अनुसन्धानमा खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको सिआईबीले जनाएको छ।
डकुमेन्ट्री बनाउने नाममा कलाकार राजेन्द्र खड्गीले मानवतस्करी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। डकुमेन्ट्री बनाउन भनेर उनले ११ जनालाई दक्षिण कोरिया पठाएर लाखौं असुलेको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
खड्गीलाई सिआईबीले बिहिबार पक्राउ गरिसकेको छ। सिआईबीका अनुसार उनीविरुद्ध काठमाडौंस्थित कोरियन दुतावासले नै उजुरी दिएको छ। एक कोरियन नागरिकसँगै मिलेर खड्गीले मानव तस्करी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेपछि खड्गीले आफुलाई कोरियनले फसाएको दाबी गरेका छन्।
सिआर्ईबी स्रोतका अनुसार गत जुलाईमा उनले ११ जनालाई भिजिट भिषामा दक्षिण कोरियामा लिएर गएका थिए। उनीहरु हाल दक्षिण कोरियामै छन्। भिषाको म्याद सकिएपछि पनि उनीहरु नफर्किएको भन्दै दुतावासले उजुरी गरेपछि अनुसन्धान गरी पक्राउ गरिएको सिआईबीले जनाएको छ। खड्गीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको सिआईबीका एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए।
‘११ जना नेपाल नफर्किएमा म जिम्मेवार हुन्छु भन्ने कागज उनले दुतावासमा पेश गरेका छन्,’ अनुसन्धानमा आबद्ध सिआर्ईबीका एक अधिकारीले भने,‘ती युवाहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाएर उनले पैसा असुलेको देखिन्छ।’
दक्षिण कोरिया गएका युवाहरुको बारेमा पनि केही खुलेको छैन। उनीहरु उतै लुकेर काम गरिरहेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
खड्गी कलाकार भएकाले बिश्वास गरेर दुतावासले भिषा दिएको थियो। त्यसको दुरुपयोग गरी उनले मानवतस्करी गरेका हुन्। खड्गी चर्चित द्वन्द्वनिर्देशक हुन्।
← गुल्मी ठूलो लुम्पेकको झुसे जंगलमा भीषण आगलागी, आगो नियन्त्रण वाहिर
एमाले–माके एकता संयोजन समितिको वैठक वस्दै →
पोखरामा क्रान्तिकारी माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरू, भावी रणनीति तय गर्ने
२२ आश्विन २०७४, आईतवार ०७:४२ Janabato Online Comments Off on पोखरामा क्रान्तिकारी माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरू, भावी रणनीति तय गर्ने
गृहमन्त्री थापालाई पत्र : ‘माइला लामाको हातमा हत्कडी किन ?’
५ श्रावण २०७६, आईतवार ०८:१० Janabato Online Comments Off on गृहमन्त्री थापालाई पत्र : ‘माइला लामाको हातमा हत्कडी किन ?’
प्रा.डा. देवकोटावारे गलत अफवाह फैलिएपछि अस्पतालले भन्यो–‘अप्रिय हल्ला सत्य होइन’
२६ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०४:३५ Janabato Online Comments Off on प्रा.डा. देवकोटावारे गलत अफवाह फैलिएपछि अस्पतालले भन्यो–‘अप्रिय हल्ला सत्य होइन’